Las Casas Filipinas de Acuzar | Otu Di na Nwunye
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke njem bụ ọmụmụ na nyocha nke ọdịbendị, ọ bụghị naanị maka taa, kama nke oge ndị gara aga. Oge ndị a na-agbanye aka, colonial na oge ochie na akụkụ dị iche iche nke ụwa, ọ bụghị nanị na-esetịpụrụ mpaghara maka mpaghara na ndị dị iche iche, ma ihe ha bụ. Otu ebe dị otú ahụ bụ Las Casas Filipinas de Acuzar.
Las Casas Filipinas de Acuzar bụ nchịkọta ụlọ nke dị na Bagac, Bataan na Philippines. N'ịbụ nke dị n'Ọdọ Mmiri Umangol, Las Casas Filipinas bụ otu n'ime ebe nkiri nleta nleta kachasị ewu na Bataan, n'agbanyeghị na ọ bụ ebe obibi nke ebe obibi ndị Spain na-amalite na 2003.
Azụ Las Casas Filipinas
N'ụzọ na-akpali mmasị, Las Casas Filipinas were ihe karịrị afọ asaa iji wuo, mezue, emesị meghere ọha mmadụ na 2010. Ọrụ na-arụpụta ọrụ nwere ebe obibi 27 na-agbasa n'elu ụfọdụ hectare 400, na saịtị ahụ n'onwe ya mere ka ọ dị ka nsụgharị oge kwesịrị ekwesị.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụghị ụlọ ndị ahụ nile bụ nsụgharị zuru ezu zuru ezu, mana nhazighachi nke ụlọ mbụ nke oge ahụ nke e mebiri ma jiri nlezianya wughachi - ọtụtụ n'ime ha na-abịa site na Manila. Onye ọhụụ ya, onye ọchụnta ego na onye mmepụta aha ya bụ Jerry Acuzar, mere atụmatụ maka saịtị ahụ dịka ụtụ na ncheta maka oge a na akụkọ ihe mere eme na Philippines.
Nnukwu oru a na-arụ ọrụ dịka igwe nke oge na-eme ka ị laghachi na 18 narị afọ nke Philippines, ma na-aga n'ihu ịgbasawanye atụmatụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ n'ụlọ obibi. Otu n'ime ihe omumu bara uru na Asia, nakwa na Philippines, Las Casas Filipinas bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na njem ọ bụla na Philippines, na Bataan.
A na-akpọ ụlọ ndị dị na saịtị ma ọ bụ mmalite ha ma ọ bụ mmuo ha, dị ka Casa Binondo, otu n'ime ụlọ ndị e wughachiri na district Chinatown nke dị na Manila si malite. Taa, ụlọ ndị ahụ na-ebu ụdị mmadụ na njirimara nke ebe ha si malite.
Otu esi aga ileta ulo: njem nlegharị anya
N'okpuru osimiri dị iche iche nke Bataan, ma na gburugburu ebe ndị mara mma ma na-edebe ya, Las Casas Filipinas dị n'ọtụtụ ụzọ, omenala omenala dị n'ebe ọdịda anyanwụ Philippines. Site na Manila, a na-elele saịtị ahụ weghachite dị ka njem ụbọchị (ọ gwụla ma ị nọ na saịtị, nke anyị ga-atụle), na njem dị mkpirikpi gafee Manila Bay. Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ ndị nweere onwe ha maka ịga na saịtị ahụ, ịchọrọ ịdenye aha maka njem nlekọta, nke na-enye gị ohere nduzi na nduzi nlegharị, backstory, na akụkọ mara mma nke akụkọ ụlọ ebe ọ bụla na-agafe ụlọ akwụkwọ.
Ntuziaka ndị a bụ ihe ọmụma dị omimi, na njem ndị ahụ na-enwe echiche abụọ nke ime ụlọ nakwa n'ime ime.
Ihe njem nleta bụkwa ọnụ. Ọ bụ ezie na ọnụahịa na-agbanwe n'etiti ụbọchị izu na ngwụsị izu, ọbụna ngwugwu kachasị ọnụ (tiketi izu ụka) na-agba banyere 2,500 Philippines Pesos - ma ọ bụ naanị banyere $ 47USD. Nke a na-agụnye njem njem, ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri nke na-enye echiche dị mma banyere mgbagwoju anya, na ịnweta ụlọ ọrụ mara mma nke Hotel de Oriente, nke dị na saịtị.
Nhọrọ Nhọrọ ndị ọzọ
Na mgbakwunye na njem nleta ahụ, njem nke osimiri na njem nleta nke Hotel de Oriente dị ịrịba ama, na ikike ha.
Osimiri Na-agagharị bụ nnukwu ịhụnanya, ebe ị na-agba gburugburu ebe a. Ebe a na-emepụta ihe dị iche iche, bridges, balconies, verandas, na mgbidi brik na-agafe agba agba ka Osimiri Umangol na-egosipụta anyanwụ, mbara igwe, na ịma mma nke ụlọ.
The Hotel de Oriente bụ oyiri kwesịrị ntụkwasị obi nke ụlọ nkwari akụ mbụ kacha mma na district Binondo na Manila. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya n'ezie, bụrụkwa ebe a na-ewu ewu maka ụdị njem dị iche iche, agbamakwụkwọ, na ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ na obere ìgwè na-adịghị mma.
N'oge na-adịghị anya, a ga-atụgharị njem nke atọ na-agafe njem nlegharị nlekọta - njem nka nke na-eme ka ihe ngosi na nka na Las Casas ', na Philippines' gara aga.
Ebee Ka I Nọrọ
Ịga Las Casas ziri ezi n'ihu - ma ebee ka ị ga-esi -anọ?
N'adịghị ka ọtụtụ ebe nleta njem nleta, karịsịa onye nwere oge dị ụtọ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịnọ at Las Casas Filipinas! Nke mbụ, e nwere ụlọ nkwari akụ 217 maka ndị ọbịa, site na Deluxe Rooms na-ehi ụra abụọ, na Family Rooms na Loft Suites na-ehi ụra isii ma ọ bụ karịa. Nlekọta ụlọ ụlọ nkwari akụ ọ bụla dị nnọọ mma, ma ọzọ na ọnụahịa dị ọnụ ala - na-amalite na ihe dịka $ 160USD kwa abalị maka Ụlọ Ọchịchị Deluxe.
Otú ọ dị, ezigbo ọgwụgwọ nwere ike ime gị ntakịrị, mana ọ ga-akwụ ụgwọ. Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị e weghachiri eweghachi na ihe onwunwe ahụ bụ n'ezie dị ndị njem nleta dị ka ọnụ ụlọ nke ha nwere ike ịnọ. Ndị a bụ ndị na-akwụ ụgwọ dị ka ebe a na-ahụ maka onwe ha, ma nọrọ na ebe obibi site na obere casas ruo n'ìgwè buru ibu.
Ebee Ka Iri
Ọ bụ ezie na enweghi ụlọ oriri na-edozi na mgbakwasị, enwere ebe dị oke mma n'ebe dị nso. Ebe ọ bụ na ala na mpaghara dịpụrụ adịpụ (ọ bụ nke a na-ahụkarị na peninshula), ndị ga-adọrọ n'agha ga-akwụ ụgwọ maka nri karịa ka i nwere ike na Manila. Ma, nri ahụ dị mma na Filipinz, ebe ndị dị na Las Casas de Filipinas adịghị iche!
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị kasị ewu ewu na mpaghara ahụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ebe ndị njem nleta, Fajardo's Lagoon and Floating Restaurant, nke dị ihe ruru otu kilomita site na Las Casas. Ọ bụ ezie na ịpụ na ahụmahụ na Las Casas, nke a bụ ebe nwere ntakịrị ntutu, ike ike nke na-enye nri dị mma nke na-esite n'ógbè ahụ n'ezie.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ahụmahụ omenala na Philippines, jide n'aka ịga Las Casas de Filipinas de Acuzar. Ebe ọgaranya, n'etiti ịma mma nke osimiri ahụ na ịma mma nke ụlọ ahụ, na-eme ka ihe dị omimi maka ndị nwere ekele maka ụlọ, akụkọ ihe mere eme, na akụkọ dị ukwuu banyere ebe, ndị mmadụ, na ebe ha nọ.
Category: Asia, Nri na ihe ọṅụṅụ, History, Philippines, omenala, Nhazi njem Tags: Asia, las casas, las casas de filipinas, Philippines
← Ndị agbata obi Boston na 3 Ị Pụghị Ịla
Nyochagharị Mgbakwunye →